Yedikuyular Kayak Merkezi Sezona Yetişecek – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean46 KahramanmarasXadiiqada Yedikuyular Ski Resort waxay Qaban doontaa Xilliga
21 / 11 / 2017 46 Kahramanmaras, Coast Mediterranean, GUUD, TELPHER, Teleski
Xilliga cayaaraha waxaa lagu ciyaari doonaa xilli ciyaareedka
Yedikuyular Ski Centre waa mid ka mid ah mashaariicda aragti ee degmada Caasimadda.
Degmada Metropolitan, Department of Studies iyo Mashaariicda Studies iyo Mashaariicda Agaasinka heleyna band ka dib markii dhamaystirka dhismaha runway ee waxbarashada sameeyay gacanta iyo dhismaha xarumaha bulshada la rakibo St Paul soo jiidasho leh marka la dhamaystiro.
Ka dib markaad ku tolayso dhejiyeyaasha kuraasta iyo kursiga kuraasta, rakibidda nidaamka xarigga ayaa bilaabmaa.
Summer Kahramanmaras degmada Metropolitan, kaas oo lagu qaban doono dhexnool Yedikuyu-Winter Recreation Area iyo bixin doonaa awoodda guud oo ay ku jiraan maalin walba dadka 2000 5000 adeego sidii skier ee miciinka ski. 4 waxay noqon doontaa xarun keliya oo loogu talagalay isboortiska jiilaalka ee raadiyaha 250.